यस कारण महसंघमाको एसोसिएट उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिँए : सौरभ ज्योती « Artha Path
यस कारण महसंघमाको एसोसिएट उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिँए : सौरभ ज्योती
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज महासंघमा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको संस्थापक सदस्य हुँदै हाल बैंकिङ, बित्त तथा बीमा समिति सभापति रहेका सौरभ ज्योती एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी हुन् । व्यवसायिक घराना ज्योति समूहका निर्देशक ज्योतिले महासंघको भूमिका पुरा गर्न आफ्नो व्यवसायलाई भन्दा धेरै जोड दिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
उनले पहिलो कार्यकालमै एसोसिएट उपाध्यक्षमा इच्छा देखाएका थिए । तर, विभिन्न परिस्थिति र “टिम स्प्रिड” का लागि उनले उक्त पद छाडेका थिए । एक प्रकारले उनलाई युवा नेता पनि भन्निछ, तर पनि उनको कपाल फुलिसकेको छ । टिमको भावना र एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रमा उनकोे “स्ट्रङ प्रिन्सिपल” छ । पहिलेको कार्यकालमा उनले अर्को पटक आउँछु भनेर अरु साथीहरुलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको ज्योती बताउँछन् । त्यहाँ उनको ६ वर्ष बितिसकेको छ ।
कर समितिमा सभापति भएर पहिलो कार्यकालमा काम गर्दा महासंघको सञ्जाल नेपाल सरकारको कर कार्यालयको सञ्जाल भन्दा बढी भएको उनको अनुभव छ । त्यसैले पनि एजेण्डा वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ भन्ने धाराणा राख्छन् ज्योती । विज्ञसहितको प्रोफेसनल सचिवालय आजको आवश्यक्ता रहेको बताउने ज्योती अबको उद्देश्य रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक समृद्धि र सबै सदस्यको हक हीतकालागि लड्ने प्रतिबधता उनको छ । “तर यो विषयबाट महासंघ अलि बाहिर गइरहेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिलेको मुद्दा नै राजनीति हुन्छ,” ज्योती भन्छन्, “को कुर्चीमा आउने ? कार्य समितिमा पनि छलफल हुँदा आधा कुरा त आन्तरिक राजनीतिकै हुन्छ । यो एकदम गलत छ ।”
महासंघ सचिवालय पनि तथ्य र तथ्यांकका आधारमा काम गर्न सक्ने किसिमले स्थापित गनरिने पर्ने ज्योतीको भनाई छ । यसका लागि पनि आफुहरुले टीमबाट महासंघको सुदृढीकरणको विषयमा सचिवालयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउँछन् । “महासंघको मुख्य मुद्दा भनेको अर्थतन्त्र जोगाउने हुनुपर्छ । खासगरी अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडले पुर्याएको असरको आर्थिक रिकभरिमा लाग्नुपर्ने टडकारो आवश्यक्ता छ । अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ । विदेशबाट लाखौं युवा स्वदेश फर्किने अवस्थामा छन्,” ज्योतीले भने, “उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण कसरी बनाउने ? दीर्घकालीन स्थायी नीतिहरु कसरी स्थापित गर्ने, थिंक ट्यांकमा कसरी अघि बढ्ने ? यस्ता विषय मेरो प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।”
“नेपालमा कुरै गर्न त सबैले ठूला–ठूला गर्छन्, कुरा होइन काम हुनुपर्यो भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसै पनि म कम बोल्ने मान्छे हो, काम कति गरेको छु भन्ने त साथीहरुले बिचार गर्नु भएको छ । अरु काम नेतृत्वमा पुगेर गर्न सहज होला भनेर यस पटक अघि सरेको छु” ज्योती भन्छन् । जसले काम गर्नका लागि त्यो पदमा पुग्ने योग्यता राख्छ त्यो व्यक्ति नै नेतृत्वमा पुग्नु पर्छ भन्ने धारणा ज्यातीको छ । सबै जना व्यवसायको नेतृत्व सम्हालेर हिड्ने भएकाले आफ्नो हकमा कामको योग्यताले आफूलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन ज्योती । आफूले दाबी गरेको पदमा सेवा गर्नलाई मौका दिन आग्रह गरेको बताउने ज्योती कामबाटै अगाडि बढेर आफूले सहयोग माग्ने अवस्थामा पुगेको रसहयोग पाएर त्यो पद पाइसकेपछि एक्लै नभई टिम भएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् ।